TUV sud la xidhiidha Cert
TUV koonfur ilaa Shiinaha, si dhakhso ah u dhis saamaynta sumadda. Waxay ka samaysay shaybaar koonfurta Shiinaha. Laga soo bilaabo 2004, waxay abuurtay wada shaqeyn qoto dheer oo dhow oo lala yeesho kormeerka anbotek. Anbotek waxay si tartiib tartiib ah u noqotay kanaal awood leh, dhakhso iyo xirfadle u ah macaamiisha si ay u codsadaan shahaadada TUV ee UPS, adabtarada korontada iyo laambadaha. Tijaabada Anbotek waxay iskaashi istiraatiiji ah la laheyd kooxda koonfurta TUV sanado badan, mugga ganacsigu waa kii ugu horeeyay ee warshadaha, wuxuuna ahaa shaybaarka iskaashi ee ugu fiican koonfurta Shiinaha sanadihii 2009, 2010, 2011 iyo 2012. Tijaabada Anbotek waxay ku guuleysatay si dhakhso leh dalbaday shahaadada koonfurta TUV ee ku dhowaad 500 shirkadood, taas oo ay si ballaaran u aqoonsadeen macaamiisha.
Imtixaanka Anbotek wuxuu kaa caawinayaa inaad si fudud ku hesho shahaadada TUV lix sababood
Sabab hal faa'iido dalab xirmo ah - hal tijaabo oo tijaabo markhaati ah, hal mar oo baas ah, gaabin wareegga shahaadada, si aad maskaxdaada ugu dejiso inaad deg deg u hesho shahaadooyin kala duwan oo ay soo saartay TUV, si alaabadaadu si dhakhso leh ugu iibiso agagaaraha adduunka;
Sababta 2: wareegga shahaadaynta iyo qiimaha ayaa leh tartan asaasi ah -TUV waxay siisaa anbotek kooxdeeda injineernimada u gaarka ah iyo sarkaalka fiisada, waxayna mudnaanta siisaa la tacaalidda dhammaan noocyada kiisaska iyo baahiyaha caddeynta, si loo hubiyo in qiimeynta kharashka iyo wareegga caddeynta ay leeyihiin wax iska cad Faa'iidooyinka asaaga.
Anbotek oo hodan ah isla markaa waayo aragnimada mashruuca duubista dufcadda nooca dhuumaha, kiiska mudada dammaanad qaadka, kharashka oo ah mid aad u tartan badan sadex faa iidooyin adeeg hal-joogsi ah - shirkadda ogaanshaha anbotek waxay bixisaa heerar kala duwan oo la talin ah alaabooyin kala duwan oo tilmaam ah xulashada dukumiintiyada dukumiintiga tarjumaadda. hagaajinta hagidda xisaab-celinta warshadda, sida adeegyada hal-joogsi;
Sababta afaraad: adeegga gaarka ah ee TUV group VIP - wuxuu ku guuleystay sharafta lamaanaha ugu fiican ee TUV afar sano oo isku xigta, wuxuu ku raaxeysanayaa daaweynta ugu sareysa ee Heerka Koowaad, si loo hubiyo in codsigeena mashruuc kasta uu noqon karo mid si weyn loo qiimeeyo iyo daaweynta VIP;
Sababta 5: waxaad diirada saartaa shahaadada TUV shahaadada mudo 10 sano ah - in kabadan 100 kiis oo guuleysta sanadkasta, kuna xeel dheer awooda hanaanka dalabka TUV ee sida ugu dhaqsaha badan wax uga qabta dhibaatooyinka iyo wada shaqeynta kooxda TUV ee aadka u adag, si howlahaaga caajiska ah aad u dajiso. noqo mid fudud oo la maarayn karo;
Sababta 6: xiriirka dhow ee ka dhexeeya wakaalada bixisa shahaadada - saamiyada imtixaanka anbotek iyo maamulka sare ee is dhaafsiga iyo isgaarsiinta Jarmalka TUV marar badan sanad kasta, si aan u xakameyno ilaha shahaadada aasaasiga ah ugana dhigo howlgalka TUV mid aad ugu habboon isla markaana waafaqsan baahida suuqa
TUV iyo sharaf wada shaqaynta anbotek
TUV oo ah lamaanaha ugu fiican South Africa sanadihii 2009, 2010, 2011 iyo 2012